Vaovao - Ampianaro anao ny fomba fanesorana ny poloney amin'ny fantsika amin'ny siansa ao an-trano ~
Ampianaro anao ny fomba fanesorana ny poloney amin'ny fantsika amin'ny siansa ao an-trano ~
Mbola tadidiko ny fahitako olona marobe nitaraina momba ny taona vaovao tamin'ny fiandohan'ny taona vaovao. Noho ny Covid-19, tsy nampoiziko fa taorian'ny sety akanjo mandry, ny manicure sy ny volo nolokoana nalahatra ho an'ny taona vaovao dia very maina daholo.
Tamin'izany fotoana izany dia nampionona ny rehetra i Z raha mbola teo amin'ny toe-tsaina tsara izy ireo, tsy very maina ny vola. Saingy rehefa afaka iray volana dia niseho ny olana vaovao: nitombo efa ho ny iray ampahatelony ny fantsika, ary tsy dia tsara ny hoho raha mijanona eo ambonin'izy ireo izy ireo ary tsy misokatra ny salon. Inona no azoko atao amin'ny fantsika amin'ny poleta vita amin'ny gel?
Ireo vehivavy izay mazàna manao haingon-java-manja dia mahalala fa ny poloney dia tsy mitovy amin'ny an'ny fantsika mahazatra. Rehefa mandeha any amin'ny magazay ianao mba hanala azy dia tsy maintsy nohosoran'ny manicurist tsara ianao mba hanesorana azy. Izany dia satria ny tampon'ny fantsika dia misy tombo-kase, izay tompon'andraikitra amin'ny hoho. Nosaronan'ny mpampianatra tombo-kase mihitsy aza ny sisin'ny fantsika mba hitazomana azy ireo lava.
Matetika izahay dia tsy manana milina fanaovana sanding matihanina ao an-trano, fa misy ihany koa ny taratasy famaohana tsotra. Soso-kevitra ny hisafidy kofehy fikosehana miaraka amin'ny fahaizan'ny fanala matanjaka ho an'ny famolahana tsara. Miovaova ny ora ana-poloney. Ny zavatra niainan'i Z dia raha mbola tsy mamirapiratra ny atiny dia hitovy izy io.
Ahoana raha tsy misy taratasy matte ao an-trano? Azonao atao ny mahita fa maro ny mikapoka fantsika dia manana sosona famolahana azy manokana, saingy somary tery ny karazany, ary tsy misy hazo fikosoham-bolo manokana ho mora ampiasaina
Avy eo atombohy ny dingan'ny fanesorana fantsika ara-dalàna. Ny poloney Uv dia tsy mitovy amin'ny poloney mahazatra. Ny tsara indrindra dia ny mividy fanalana fantsika matihanina na kit poloney. Ankehitriny tsy mora ny mividy mividy, manao izany amin'ny Internet ny matoatoa.
Azo esorina ao anaty kaopy kely ny fanesorana ny hoho, ary avy eo atsofohy mandritra ny 8-10 minitra ny rantsan-tànanao ary avoaka avy eo; ny fiasan'ny kitapo fantsika dia tsotra kokoa, misokatra fotsiny ary fonosina ny rantsan-tànana folo, matetika 15 minitra.
Aorian'ny "batisan'ny" famongorana ny fantsika, lasa malefaka ilay poloney. Amin'izao fotoana izao, atosiho moramora ny sisiny ary hiakatra izy, ary atosiho moramora hatramin'ny farany amin'ny mpanery vy, ary ny lakaoly fantsika dia hesorina soa aman-tsara.
Raha mbola misy sisa tavela, dia ampiasao fehikibo ho fasika maivana. Farany, aza adino ny manosotra sy manisy menaka otrikaina. Ny famirapiratan'ilay fantsika tonga lafatra vao nesorina dia tsy tsara ary somary marefo, ary ho sitrana tsikelikely ao anatin'ny andro vitsivitsy.
Fa raha ny tena izy, ny famolahana ny fantsika irery dia mora maratra, noho izany dia tsapan'i Z fa raha manao fantsika iray na loko iray na loko mandoko ianao (fa tsy ilay karazan'endrika sarotra be), dia ny matoatoa izay misy fantsika ao an-trano afaka mamorona ny loko ihany koa.
Tadiavo ny nomeraon'ny loko poloney izay mitovy amin'ny loko fantsika, ary avy eo asio sosona maromaro kokoa amin'ilay ampahany efa nitombo, ary avy eo apetaho amin'ny fantsika manjelanjelatra ny faritra rehetra amin'ny fantsika. Ny vokany dia tokony ho tsara.
Na izany aza, na dia mety sy mora lazaina aza ny voalaza etsy ambony, ny fandidiana tena izy dia mety tsy ho tsara toa ny mandeha amin'ny salon salon, noho izany misy fomba hafa hanapahana ireo hoho efa lehibe.
Lazy Cancer Z dia nanao fantsika mena monochromatic nandritra ny taom-baovao sinoa. Tsapako fa mbola afaka mahita azy aho aorian'ny nanapahana ny ampahatelony. Mieritreritra aho fa tsy afaka mivoaka izao, ka mitombo sy mihena miadana. Toa tsy maninona izany?
Amin'ny ankapobeny, na manala azy ireo manokana ireo matoatoa na mikasa hitazona azy ireo ho toy izao, mitandrema mba tsy haka lakaoly fantsika! Tamin'ny voalohany, ny fanesorana ny hoho ara-tsiansa dia tsy miteraka fahasimbana lehibe amin'ny hoho, fa raha manery azy ianao dia mora ny manimba ny fantsika amin'ny fantsika na koa ny mamaivay.
Ary raha manicure tsotra toa an'i Z amin'ity indray mitoraka ity, ary tsy maninona na dia tazominao lava aza, mbola amporisihina ny mazàna hitandrina fahazarana tsara ny manapaka matetika mba hisorohana ny fanangonana loto ao amin'ny hoho, izay tsy mety amin'ny ny vatana ~